I-DTG → Ukuphrinta kwe-Direct To Garment kuyindlela yesimanje eqondile
Ukuphrinta kwe-DTG - indlela yesimanje yokuhlobisa ngqo
Ukuphrinta kwe-DTG noma i- "Direct To Garment" ngu indlela yesimanje ukuhlobisa okuqondile kwezindwangu nezingubo. Inqubo ye-DTG ikuvumela ukuthi usebenzise noma imiphi imidwebo kwindwangu kakotini noma kukotini ngokuhlanganiswa kwe-elastane / viscose. Izithombe zenziwa kusetshenziswa iphrinta ekhethekile. Imishini esinayo epaki yethu yomshini iyimodeli yakamuva yephrinta Mfowethu GTXpro Bulkokuthi, ngenxa yamakhanda ezimboni, isheshe inyathele ngqo kokuqukethwe. Ukuphrinta ngenqubo ye-DTG kunika amandla ukukhiqizwa kabusha kombala okuphelele ngokushintshwa kombala. Ukuphrinta kungenzeka ngaphandle kwesidingo sokulungiselela iphrojekthi kusuka esiqeshini esisodwa.
Ukuphrinta isithombe kusikibha usebenzisa indlela ye-DTG
Ukuqina kokuphrinta kwe-DTG kuncike ezintweni eziningana. Okokuqala, imodeli nemingcele yayo - imishini emisha, kulapho more ikhwalithi engcono futhi umkhiqizo. Ezinye izinto ezithonya ukuqina yizinhlobo zikapende ezisetshenzisiwe, indwangu okwenziwa ngayo ukuphrinta namakhono esisebenzi.
Iphrinta yethu kaMfowethu GTXpro Bulk yenza kwenzeke phrinta ngobukhulu obukhulu obungu-40,6 cm x 53,3 cm. Ngenxa yokwehliswa kwezindleko nesikhathi sokugcinwa, kungenzeka ukulungiselela umshini wokuphrinta ngokushesha futhi unciphise inani leziphazamiso emsebenzini. Ukuphakama kwekhanda okuhle kakhulu akugcini nje ngokumisa inqubo yokuphrinta lapho okuphakelayo kusondele kakhulu ekhanda, kepha futhi kuyazwela ebangeni elikhulu kakhulu phakathi kwekhanda ne-feeder, ehlala iqinisekisa ikhwalithi ephezulu yokuphrinta. Ikhanda elisha likayinki elimhlophe elithuthukisiwe ngenani elikhulayo lemibhobho linikeza ngemodi yokuphrinta esheshayo eyi-10%. Lokhu, nakho, kuhumusha kube izikhathi ezimfushane zokucubungula ikhasimende.
Iphrinta eqondile ye-DTG
Amathuba abanzi wokuphrinta kwe-DTG
Iphrinta entsha ye-DTXpro Bulk iyimodeli eguquguqukayo futhi eguquguqukayo ngokweqile. Inikeza ngamakhono okukhiqiza ngobuningi, ikwenze kube kuhle ukugcwaliseka koku-oda okuningi.
IZITOLO NEZINHLANGANO: I-GTXpro yisisombululo esikahle sokulungiselela okunezinhlobonhlobo zezitolo, ama-ejensi wokukhangisa, izikhungo, amakilabhu nezindawo zokusebenza. Ubuchwepheshe be-DTG buyashintsha futhi buhlangene. Ngenxa yayo, unganweba indawo yakho yokugcina izinto ngemikhiqizo eyenziwe ngezifiso efana ne- Amahembe kuwo wonke umuntu onegama lakhe, isihloko somsebenzi, izikhwama zokukhangisangisho nezicathulo ngomsebenzi wakho wobuciko. Okomuntu siqu kuthanda ukukhonjwa komsebenzisi ngomkhiqizo, okuwuthonyayo isithombe esihle nokuzethemba kuyanda.
Ukuphrinta kwe-DTG kuzikibha zethimba lamavolontiya
IMIBONO YAMAQEMBU NEZIPHO NGAMUNYE: UKhisimusi, iPhasika, amajubili, impumelelo yezobuchwepheshe, uSuku Lomama noma uSuku Lwezingane yizikhathi ezidume kakhulu zokulungiselela izipho ngezikhathi ezithile. Umuntu ngamunye, owenziwe ngezifiso ngezikhathi ezithile - umuzwa ongcono nesikhundla esinamandla. Izipho zenkampani zabasebenzi noma izipho zejubili njengoba imiklomelo emincintiswaneni ithuba elihle loku ukufudumeza isithombe. Ngokulandelayo, izipho, ikakhulukazi ezisebenzisekayo, njengamathawula lapho kugujwa iminyaka engu-20 inkampani ibe khona noma uphawu lomklomelo olutholwe yinkampani, kuzoba igajethi enkulu yabalingani kanye namakhasimende angaba khona ngoba gcizelela isikhundla senkampani ngokumelene nomncintiswano.
Ngokulandelayo, ithuba lokuphrinta kusuka kucezu olulodwa nje livula inketho yokulungiselela isipho sangempela somuntu okhethekile ngosuku olukhethekile. Ubudlelwano bomuntu ngamunye obuhlelwe ngesipho esidalwe ngokubamba iqhaza komuntu, nekhwalithi ephezulu, kuzoshiya izinkumbulo ezimnandi iminyaka eminingi. I-GTXpro ikuvumela ukuthi uhlale uguquguqukayo ekukhiqizeni, isinikeza ithuba lokusabela ngokushesha nangokomnotho kuzinguquko kuma-oda.
Ukuphrinta kwe-DTG akudingi ukulungiswa kwephrojekthi, okungenye yezinzuzo zayo eziphambili (njengoba kunjalo nokuphrinta kwesikrini noma ukugqokwa kwamakhompyutha). Ukwenziwa kwayo kungenzeka ngqo kusuka kufayela leklayenti, okumele lilungiswe ngokufanele. Kungenzeka uphrinte kusuka kucezu olulodwa, olukuvumela ukuthi ukwenze ukuphrinta kokuhlola ngaphambi kokwenza inani elikhulu. Futhi phrinta isithombe kungenzeka, kepha kubalulekile ukuthi kutholakale esinqumweni esiphakeme kakhulu.
UKUQINISEKA: Kuyinzuzo enkulu ukuqina okuphezuluuma yenziwa kwimishini yobuchwepheshe. Ukusetshenziswa kokuthuthuka okusha kokusebenza okwengeziwe komnotho kuvumela izindleko eziphansi kakhulu zokuphrinta. Okokusebenza kufanele kube kukotini noma kuhlanganiswe i-viscose, noma i-elastane, kepha kubalulekile ukuthi kungabi okulula kakhulu.
Ukulandela izincomo zomkhiqizi kuzosivumela ukuthi sijabulele umphumela wephrojekthi yethu isikhathi eside. Ngenxa yosizo lethimba lethu, ungalungisa indlela yokuhlobisa, futhi ungakhetha imikhiqizo efaneleke kakhulu kweyethu isitolo.
Ukuphrinta kwe-DTGukuphrinta ezingutsheniI-DTG ezikhwameniI-DTG ishibhileamagajethi ane- printIzikibha eziphrintiweukuphrinta okuqondileukuphrinta kwemidwebo nemibhalo eqoshiwelogo yenkampani phrintaphrinta kuma-sweatshirtsukuphrinta kuzikibhaukuphrinta kwizikibha zalo mcimbiphrinta ezingutsheniukuphrinta ezingutsheni ngentengo ephansiukuphrinta kuma-t-shirtsukuphrinta ezikhwameniukuphrinta kusuka kucezu olulodwaukuphrinta kokuhlolaukuphrinta kwesithombeumklomelo womncintiswanoizingubo ezinokuphrinta kwabasebenziisipho sikagogoisipho kumkhuluisipho sowesifazaneisipho kumamaisipho sendodaisipho somnganiisipho somnganiisipho sodadeisipho sikababaisipho sikaKhisimusiisipho sesikhumbuzoisipho sosuku lokuzalwaizipho zabasebenziizipho ngazinyeizipho zamaholideizipho ezikhethiweukuphrinta eshibhileukuphrinta eshibhileukuphrinta kwelogo unomphelaukuphrinta kwakho ezikibheniukuphrinta okwakho ezingutsheni